Olee otú Tinye Album sere MP3 maka Mac
> Resource> Video> Olee otú iji Tinye Album Art ka MP3 on Mac
Music aghọwo akụkụ nke ndụ anyị. N'ihi na crazy music hụrụ, ị pụrụ anakọtara karịa ọtụtụ puku songs na kọmputa. Ma ọ na-aghọ a hassle mgbe ị na-agbalị idozi ha si ma ọ bụ ịhụ otu ụfọdụ song ngwa ngwa. Gịnị pụrụ inyere dị otú a? Ee, album artwork ga-enye gị anya ụfọdụ ume ọhụrụ na-enyere aka na n'ịchọpụta songs mfe. Ma album nkà na-mgbe na-efu ma ọ bụrụ na MP3 faịlụ na-dere online ma ọ bụ bibiri si vidiyo ma ọ bụ CD. Ya mere, ị ga-mkpa a ọma mkpado nchịkọta akụkọ aka jupụta songs na artworks. Wondershare TidyMyMusic maka Mac (Wondershare TidyMyMusic) bụ otu ọkachamara a na ubi. Ọ ike ịgbakwunye album nkà niile MP3 faịlụ na dị nnọọ ole na ole clicks. Ọ dịghị mkpa ka tinye album nkà mp3 otu otu, ma-etinye ndị niile MP3 faịlụ na mmemme iji mata cover artwork na ogbe. Amagbu, ọ bụghị ya?
Akpa download a Mac omume iji wụnye. Mgbe ahụ na-emeghe ya iji nweta njikere na ị ga-ahụ a neatly e interface maka mfe ojiji. Mgbe ahụ, anyị ga-ekwu banyere otú tinye sere MP3 on Mac dị ka n'okpuru.
1 Import music faịlụ ka TunesGo
Mgbe ị mepee usoro, ọ ga-amalite tinye niile music on iTunes ka idozi iTunes taabụ, nke pụtara na ị na-adịghị mkpa mbubata iTunes listi ọkpụkpọ aka.
Iji tinye MP3 faịlụ site na mpaghara gị nchekwa, ị kwesịrị ị na-aga idozi Music taabụ ebe i nwere ike pịa Open File bọtịnụ ma ọ bụ dị nnọọ ikpuru-na-dobe faịlụ ma ọ bụ nchekwa mbubata niile MP3 faịlụ.
2 Tinye album sere MP3
Họrọ a song na otu nke na taabụ nke idozi iTunes ma ọ bụ idozi Music, pịa Chọpụta na-amalite na-agbakwunye sere MP3. Site n'ụzọ, n'oge usoro, ID3 ọmụma na lyrics nwekwara ike mata.
Ndetu: 1. Ị nwere ike họrọ ọtụtụ songs na pịa Chọpụta button na otu ọnọdụ.
2. Ọ bụrụ na ị pịa iṅomi button n'elu na na-na abụọ checkbox họrọ, usoro ihe omume ike ịchọ unidentified songs na-amalite na-akọwapụta. Ọzọkwa, ọ ga-ịchọpụta niile duplicated songs. Ị nwere ike na-eche maka oge ụfọdụ ọ bụrụ na gị music Library bụ buru oke ibu.
Mgbe ọmụma a kọwara, pịa Mee ka ịgbakwunye ọhụrụ ozi na MP3 faịlụ.
3 Hazie music ọmụma
Ọ bụrụ na ị na-adịghị afọ ojuju na ọmụma achọpụtara-akpaghị aka, dị nnọọ pịa "pen-in-akwụkwọ" na akara ngosi na ịgbakwunye Obodo oyiyi ma ọ bụ ụdị ọ bụla ọmụma dị ka amasị gị.
Mgbe niile ndị a, i nwere ike inwe music na ọmụma zuru ezu gụnyere album artworks, nke ga-eme ka ọ na-adaba adaba ijikwa niile MP3 faịlụ. Nye ya a Go na i nwere ike ịhụ ndị ọzọ fancy atụmatụ.
NDỤMỌDỤ: Gịnị bụ album nkà?
Album nkà, kpọkwara album cover artwork, album artwork ma ọ bụ nanị artwork, bụ ihe oyiyi faịlụ atụkwasịkwara music na nyochawa a akụkụ nke ID3 mkpado mgbe ọ dabeere ruo nke abụọ version. Ọ dịgasị na ụdị na a zuru ndepụta nke 21. Tulee ebe a ịhụ nkọwa ndị ọzọ.
Olee otú iji tọghata AVI on OS X Mavericks